Ubucwebe kunye nomtsalane mveliso - China ubucwebe kunye nomtsalane abavelisi kunye nababoneleli
Izipho eziMhle eziMenyezelayo ezibandakanya izinto zobugcisa zentsimbi ukusukela ngo-1984. Iigrafti zethu kunye neeCharms zilungelelaniswe njengamacici, amacici, izacholo zomqala, izacholo, amacici, amakhubalo, iintsimbi zewayini, iintsimbi zomnxeba, iibroshi. Ungaphonononga ingqokelela yethu emangalisayo ukufumana inkuthazo emva koko wenze uyilo lwesimboli yobuntu. Isiqwenga ngasinye sasisongelwe kwaye sakhazimla kakuhle ngomgangatho oqinisekileyo. Thumela umyalezo wakho ngendlela obuyithetha ngayo, siza kwenza ukungunda ukuze sizibeke kumakhubalo, sithembe ukuba le nto incinci iya kuyenza ibe mhle ngokwesiqhelo. SUkuqwalaselwa ● Ukuncamathisela: umtya kwizinto ezahlukeneyo, amakhonkco, isacholo somqala, ikhonkco. ● Uyilo: 2D okanye i-3D okanye ikyubikhi epheleleyo, izinto, imilo, ubungakanani, imibala eyenziwe ngokwezifiso ● MOQ: 100pcs ● Ukupakisha: i-polybag, ibhegi yevelvet, ibhokisi yesipho, ibhokisi yesikhumba.
Abanini Amacici / Abaphathi beeRingi